Akwụkwọ 3 maka ndị owu na-ama | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na mbata nke oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, oyi na-akpali anyị, n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, iji bie ndụ obibi dị mma na, ya na ya, ịnabata ịnọ naanị ya nke nwere ike ịgwọ ọrịa na-adabaghị oke. Egwú nke epupụta, anwụ na-acha n'oge ma ọ bụ ọnwụ nke oke ịhụnanya ahụ bụ ụfọdụ ihe nwere ike iduga anyị ịchọta ezigbo onye anyị na ya ga-ebi akwụkwọ. Ma olee ụzọ ka mma karịa iji ehihe ndị a na ndị a Akwụkwọ 3 maka ndị owu na-ama.
3 Withoutmụ nwoke na-enweghị ụmụ nwanyị
Otu n'ime akwụkwọ ndị a ghọtahiere nke narị afọ nke XNUMX si n'aka Ọ bụ Herman Hesse, Onye edemede German kpebiri ime ka nsogbu ime mmụọ nke West na-enwe na 20s pụta ìhè, karịsịa mgbe ntiwapụ nke Agha Worldwa nke Abụọ. Site na nchegbu dịka nke a ka amụrụ otu n'ime akwụkwọ ya ndị ama ama (site na ikike site na Siddhārtha), nke a «Steppenwolf» nke a gosiputara na onu ogugu nke nwoke nke kewara n'etiti mmadu ya na mmuo ohia nke na-ebi n'okporo ámá na o na-ejeghari dika onye aririọ, dika nkpuru obi na-awaghari na uwa di omimi. N'ịbụ onye dị oke ma na-akwụghachi ụgwọ iji gụọ, Steppe Wolf bụ akwụkwọ kwesịrị ekwesị maka ndị mepere emepe. Na-emeghe anyị ga-asị.
Akwụkwọ ga-enyere aka na nnyefe nke Akwụkwọ Nobel Ernest Hemingway na 1954 o si ala di oku karie Hessian Germany. N'okwu a, akụkọ ifo nke otu onye na-akụ azụ na-eto eto Cuba nke na-anwa ịnwa ịma aka nke oke Caribbean iji jide azụ azụ buru ibu abụghị naanị mkpịsị aka maka ndị ahụ ka nwere nsogbu edozighi, mana ịdị mfe nke akụkọ a na-eme ka ọrụ bipụtara na 1952 na iwu maka mmadụ niile.
Withoutmụ nwoke na-enweghị ụmụ nwanyị
Haruki Murakami bụ otu n’ime ndị kasị dee akwụkwọ Japan, na-ekele otu akụkụ maka anwansi na mmetụta nke akụkọ ha na-enye, kpara n'etiti eziokwu na nrọ. Akwụkwọ ya kachasị ọhụrụ, nke e bipụtara na 2015, bụ mkpokọta akụkọ asaa gbasara ndị nwoke owu na-ama, ndị na-enwetabeghị nkwụsị ma ọ bụ na ha enweghị ike ijigide mmekọrịta. Akwụkwọ nke ụmụ nwanyị na-aghọkarị ndị isi na ndò nke akụkọ ọ bụla, nke anyị na-akọwa Samsa n'ịhụnanya, nke kachasị kafkaesque nke set, ma ọ bụ Sherezade, nke onye edemede na-asọpụrụ N'abalị Arabian.
Ndị a Akwụkwọ 3 maka ndị owu na-ama Ha ga - abụ ezigbo ndị enyi nke ehihie ndị ahụ nke kọfị na - ekpo ọkụ, blanket na akwụkwọ ga - abụ ihe omume ntụrụndụ kachasị mma (na nke kachasị eche echiche) maka nwoke ọ bụla na - agụ ya nwere obere nchegbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ 3 maka ndị owu na-ama
Agadi nwoke na oke osimiri soro m na nwata. The nkuchi wolf na nsogbu nsogbu nwa m na Murakami ruo ọgwụgwụ nke ụbọchị m. Akwukwo bu ezigbo enyi m. Daalụ maka ndepụta ahụ
Zaghachi Virasoro Juan
Mgbe ahụ emere maka gị edemede a Virasoro 🙂 Eziokwu bụ na ọ na-achọ ịmata etu akwụkwọ ụfọdụ siri akara akara oge na ndụ anyị. Echiche kacha mma!